Coronary Artery Bypass Graft – Wecaremyanmar
Coronary Artery Bypass Graft (CHD ရောဂါမှာ နှလုံးသွေးလျှောက်မှုကောင်းစေရန် သွေးကြောဆက်ပေးခြင်းဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသနည်း)
Coronary Artery Bypass Graft လို့ခေါ်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့….. ယခုခေတ်မှာ ခေတ်စားလာတဲ့ Coronary Heart Disease (CHD)ရောဂါကို ကုသတဲ့ Surgery (ခွဲစိတ်ကုသနည်း) တစ်မျိုးပါ။ အတိုကောက်အနေဖြင့် CABG လို့အသိများကြပါတယ်….
တစ်နည်းအားဖြင့် နှလုံးကိုသွေးထောက်ပံ့နေတဲ့သွေးကြောတွေမှာ သွေးခဲ/အဆီခဲများပိတ်ဆို့ပြီး သွေးစီးဆင်းမှုလျော့နည်းတဲ့အခါ အခြားသွေးကြောတစ်ခုနဲ့ သွေးကြောဆက်ပေးသော ခွဲစိတ်ကုသနည်းဖြစ်ပါတယ်။
CHD ဆိုတာ ? ? ?
Coronary Heart Disease ဆိုတာ Coronary artery (နှလုံးကို သွေးလျှောက်တဲ့သွေးကြော) တွေမှာ Plague (အဆီခဲတွေ၊သွေးခဲ) တွေ ပိတ်ဆို့ပြီး နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းလာခြင်းကြောင့် နှလုံးကို သွေးကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တော့တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်. . . .
Coronary artery (နှလုံးကို သွေးလျှောက်တဲ့သွေးကြော) တွေက နှလုံးကို အောက်စီဂျင်ပါတဲ့သွေးတွေကို ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ သွေးကြောတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
နှလုံးကို သွေးလျှောက်တဲ့သွေးကြော(Coronary artery) အတွင်းနံရံတွေမှာ အဝလွန်ခြင်းကြောင့် အဆီခဲတွေ၊ သွေးကြောနံရံ ယိုစိမ့်မှုကြောင့် သွေးခဲတွေ စုပုံလာပြီး များလာတဲ့အခါမှာ plague လို့ခေါ်တဲ့ မာသော သွေးခဲ၊အဆီခဲအချပ်တွေက သွေးစီးဆင်းတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ကျဉ်းသွားစေတယ်။
နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးကတော့ နှလုံးကို သွေးထောက်ပံ့မှုလျော့နည်းသွားခြင်းကြောင့် သွေးထဲမှာ ပျော်ဝင်နေတဲ့ လိုအပ်သော အောက်စီဂျင်ပမာဏကိုလည်း လုံလုံလောက်လောက် မထောက်ပံ့ပေးနိုင်တော့ချေ။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ နှလုံးကို လိုအပ်သောအောက်စီဂျင်မပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် Angina လို့ခေါ်တဲ့ Chest pain ရင်ဘတ်နေရာမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် စူးအောင့်ခြင်း ကိုခံစားရတတ်တယ်။ Angina အတွက်ကုသတဲ့ဆေးတွေလည်းရှိပါတယ် . . . .
နှလုံးသွေးလွှတ်ကြောထဲမှာ ပိတ်ဆို့မှုများလာပြီး ဆေးနဲ့မနိုင်တော့တဲ့အခါမှာ အခြားနည်းလမ်းကတော့ Surgery(ခွဲစိတ်ကုသခြင်း) : အခြားသွေးကြောတစ်ခုနဲ့ coronary artery (နှလုံးသွေးကြော)ကို ခွဲစိတ်ပြီး ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် လုံလောက်သောသွေးပမာဏကို နှလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ အဲ့ surgery နည်းကို Coronary Artery Bypass Graft လို့ခေါ်ပါတယ် . . .
CABG ဆိုတာဘာလဲ ? ? ?
Coronary Heart Disease ကြောင့် နှလုံးကို သွေးကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာ Coronary Artery Bypass Graft surgery လုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်…ဒီနည်းလမ်းက ကုန်ကျစရိတ်များပြားတယ်ဆိုသော်လည်း ကောင်းကျိုးတွေကအများကြီးရှိပါတယ် . . .
Angina လို့ခေါ်တဲ့ Chest pain ရင်ဘတ်နေရာမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးအောင့်တဲ့ အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ Nitrol (GTN, Glyceryl trinitrate) ကို sublingual (လျှာအောက်ငုံဆေး) ကိုသောက်ရပါတယ်. . .ဆေးမမီရင် Heart attack နဲ့ လဲကျပြီး အရေးပေါ်ခန်းထိ ရောက်နိုင်ပါတယ်. . . .
CABG လုပ်ခြင်းဖြင့် Heart attack ကို အများကြီးလျော့ချနိုင်ပြီး Coronary artery disease ကိုလည်း သက်သာစေနိုင်သည်။
CABG ကဘယ်လိုမျိုး surgery (ခွဲစိတ်မှု) မျိုးလဲ ? ? ?
နှလုံးကို သွေးထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ Coronary artery မှာ Plague (အဆီခဲတွေ၊သွေးခဲ) တွေ ပိတ်ဆို့ပြီး နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းလို့ သွေးကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာ အခြားသွေးကြောတစ်ခုနှင့် ဆက်ပေးပြီး လုံလောက်တဲ့ အောက်စီဂျင်ပြည့်ဝတဲ့ သွေးပမာဏရရှိအောင် ခွဲစိတ်ကုသနည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်….
များသောအားဖြင့် Coronary artery နဲ့ဆက်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့သွေးကြောတွေကတော့
1) Saphenous vein in leg (ခြေထောက်မှာရှိတဲ့ Sphenous သွေးပြန်ကြောကို Aorta (သွေးလွှတ်ကြောမကြီး) နဲ့ coronary artery (နှလုံးသွေးလွှတ်ကြော)နဲ့ဆက်ပေးပြီး သွေးပြန်လျှောက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်…လက်ရှိမှာ အသုံးအများဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်)
နောက်တစ်နည်းကတော့ Internal mammary artery in the chest wall ရင်ဘတ်နားမှာရှိနေတဲ့သွေးကြောကို coronary artery (နှလုံးသွေးလွှတ်ကြော)နဲ့ သွေးကြောသွေးခဲပိတ်ဆို့နေတဲ့ နေရာနားမှာ ဆက်ပေးပြီး သွေးပြန်လျှောက်အောင်လုပ်တဲ့ နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ပုံမှာလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်. . . . J
CABG ကို ဘယ်လိုလူနာတွေမှာ ပြုလုပ်သင့်လဲ ? ? ?
* Coronary artery disease (CHD) ရောဂါ ပြင်းထန်သောလူနာများ
* Coronary artery နှလုံးကိုသွေးလျှောက်တဲ့သွေးကြောမှာ blockages (အဆီခဲတွေ၊သွေးခဲတွေပိတ်ဆို့မှု) နေရာများ များပြားသောလူနာများ
* CHD ပြင်းထန်သောကြောင့် အခြားကုထုံးများ coronary angioplasty consisting of2types Balloon angioplasty and Stent Angioplasty (ဇကာကွက်/balloon ထည့်ခြင်းဖြင့်သွေးခဲပိတ်ခြင်းကိုဖိနှိပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် သွေးစီးဆင်းမှုကို ကောင်းမွန်စေသောနည်း) (သို့) သောက်ဆေးများဖြင့် မသက်သာသောလူနာများ
* နှလုံးသွေးကြောပိတ်ပြီးသွေးမလျှောက်လို့ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ မောခြင်း၊ heart attack ခဏခဏရခြင်းများမှ သက်သာချင်ပြီး Quality of life (ဘဝသက်တမ်းကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြတ်သန်းခြင်း)ကို မြင့်တက်စေချင်သော လူနာများ
J Improving quality of life and reducing angina and other CHD symptoms
(ရင်ဘတ်နေရာမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးအောင့်ခြင်းကို လျှော့ချပေးပြီး quality of life ကိုမြင့်တက်စေသည်)
J Improving the pumping action of heart if it has been damaged byaheart attack
J Lowering the risk ofaheart attack (in some patients such as diabetes)
(Heart attack နှလုံးရောဂါရုတ်တရတ်ထဖောက်ခြင်း ကို လျော့နည်းစေနိုင်သည် ဥပမာအားဖြင့် သွေးချို၊ဆီးချိုလည်းရှိနေတဲ့ လူနာရှင်များ)
J Improving the chance of survival
(နှလုံးရောဂါရှိနေပေမယ့် အသက်ရှင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းကို တိုးတက်စေနိုင်သည်)
CABG ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ဝင်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကတော့
Ø ခွဲစိတ်ထားတဲ့နေရာမှာ သွေးထွက်ခြင်းနှင့် ရောဂါပိုးမွှားများအလွယ်တကူ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း
Ø ခွဲစိတ်ဒဏ်ရာကြောင့် ဖျားနာခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း
Ø အချို့လူနာများတွင် Heart attack ရုတ်တရတ်နှလုံးရောဂါထဖောက်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။
Ø ထို့ကြောင့် CABG နည်းဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးတဲ့နောက်မှုာ ဆရာဝန်မှာကြားတဲ့အတိုင်း တသွေမတိမ်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်. .